Nwere ike ịnwale GRID ịntanetị ọtụtụ beta | Gam akporosis
Si GRID abụrụlarị egwuregwu ịgba ọsọ kachasị mma n'onwe ya na anyị nwere ugbu a na gam akporo, GRID Autosport Online Multiplayer bịarutere iji nye gị ohere ahụ pụrụ iche na egwuregwu megide ndị egwuregwu ndị ọzọ. Anyị anwalela beta nke simulator a nke anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ dịka ọ dịtụbeghị tupu ịgbanye ekwentị anyị ka ọ bụrụ na ọ bụ wiil ahụ n'onwe ya.
Feral Interactive malitere ụbọchị ole na ole gara aga GRID Online Multiplayer ọha beta na gam akporo. Beta a bụ n'ezie iji nwalee nka ọtụtụ GRID wee tinye ha na nke isi wee nwee ọfụma karịa egwuregwu a pụrụ iche nke anaghị akwụ ụgwọ ma na-efu euro 9,995 na ụdị ikpeazụ ya.
1 Nwaleenụ nka GRID
2 Eziokwu abaghị uru
3 Akwa elu anyi
Nwaleenụ nka GRID
Anyị ekwuolarị banyere nnukwu GRID nke bịara na gam akporo ịhapụ ndị ọzọ nke asọmpi na-eri ájá. Bebụ na beta anyị agaghị enwe ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site n'ụkpụrụ ọrụ, yabụ anyị ga-emegharịrị maka ihe Feral Interactive ghọtara bụ nke na-egwu egwu.
N'oge anyị gwuru, anyị enweela obi ụtọ iji nwalee ọnọdụ "ntachi obi" na egwuregwu ụfọdụ nke anyị ga-enwe ike sọọ mpi site na ndị egwuregwu 2 ruo 6. Anyị ga-enwe ike họrọ nsogbu mode inwe enyemaka zuru oke na egwuregwu ahụ, dịka ntuziaka ahụ nke na-agwa anyị mgbe anyị kwesịrị ịdapụ, ma ọ bụ gaa na ọnọdụ ndị ọkachamara karịa nke anyị na-enweghị enyemaka dị iche iche ma anyị ga-agbaji ma hapụ osooso.
Ee anyị nwere Ntuziaka iji gosi ụzọma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya, anyị ga-ahụ onwe anyị ịdaba na bọọdụ mkpọsa ahụ. Ma ọ bụrụ na anyị etinyeworị mmiri ozuzo na abalị, GRID na-etinye anyị n'ihu ihe ndị kachasị dị iche iche ka ịkwọ ụgbọala wee dị ka o kwere mee.
Eziokwu abaghị uru
Nke a bụ otu n'ime njirimara kachasị ukwuu nke GRID Multiplayer na nke ahụ na-ewepụta ya, na ọtụtụ, site na egwuregwu ndị ọzọ na-abanye Google Play Store. Na ọkụ, ndị ahụ alụlụ, na dị ka onye ọ bụla mmewere na anyị nwere na sekit na sekit, dị ka bọọdụ mkpọsa ndị ahụ na-emebi emebi, gbakwunye na ezigbo ịkwọ ụgbọala.
N'ezie, ọ nwere dịgasị iche iche nke ugbo ala ma onye obula nwere uzo ya na ike nke anyi aghaghi imeghari. Anyị ga-anwa ịnwale ma chọpụta nke anyị nwere ntụsara ahụ. Site na ikwu nke a, ị nwere ike ịghọtaworị na ọ bụrụ na ị nweta GRID, ị ga-enwe egwuregwu ruo ọtụtụ ọnwa. Ọ bụghị egwuregwu ruo ụbọchị abụọ. Nke ahụ doro anya.
Na-egwu ụfọdụ ọtụtụ egwuregwu ahapụwo anyị ezigbo mmetụta ma na-egwu egwu n'abalị ahụmịhe ahụ dị mma. Enwere ike ịchọta ahụmịhe ole na ole sitere na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụrụ na anyị aghọta na ndepụta nke ekwentị ndị dakọtara adịchaghị oke, ị nwere ike ịghọtaworị na ọ chọrọ akụ na igwe dị mma.
Akwa elu anyi
Pixels si nke abụọ, ndị elu-elu nke Galaxy si S8 na OnePlus site 5, ha na-dakọtara mobiles na nke anyị ga-enwe ike n'ụzọ zuru okè na-enwe oké ọkwọ ụgbọala simulator. Anyị na-akwado ka ị gafee ndepụta nke Storelọ Ahịa Play ịzọpụta onwe gị nbudata nke gigabytes ahụ wee si otú ahụ ghara igbu oge dị ukwuu.
La GRID si ọtụtụ beta dị ụtọ ọ na-egosikwa anyị ebumnuche na Feral ga-eme egwuregwu a ka ọ kacha mma maka mkpanaka. Ọ bụrụ na ịnweghị oge ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ 9,99 euro maka GRID, gbalịa ọtụtụ egwuregwu a na-emeghe beta nke ịchọrọ akaụntụ onye ọrụ iji nwee ike igwu ya. Ọ bụ n'efu, yabụ na ị nwere ya niile maka onwe gị.
una nnukwu beta ule nke GRID multiplayer na i nweela ya na Playlọ Ahịa Play. Ezigbo ihe nkedo ịkwọ ụgbọala na-echere gị na mkpanaka gị mgbe ọ bụla ị nwere njedebe dị elu.
Iji nwalee ọtụtụ mmadụ GRID a bụ ihe zuru oke karịa na ị nwere ya n'efu.
Usoro edemede: 8,1
Anya kacha mma ebe ị na-ele anya
Dị nnọọ ezigbo na ịnya ụgbọ ala
Sere gyroscope ka o jiri ya mee ihe
Ọ bụ naanị beta
GRID ™ Autosport - Nnwale Multiplayer Online
Developer: Mmekọrịta mmekọrịta ọnụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Anyị nwalere GRID Autosport Online Multiplayer
realme ga-eweta smartwatch mbụ ya na Mee